अध्यनले भन्यो नदीमा बाढी आउने खतरा अबका बर्ष देखि झनै बढ्ने छ ! यस्तो छ कारण « Light Nepal
अध्यनले भन्यो नदीमा बाढी आउने खतरा अबका बर्ष देखि झनै बढ्ने छ ! यस्तो छ कारण
Published On : 12 January, 2018 11:50 am
बर्लिन, जर्मनी, २७ पुस – जलवायु परिवर्तनसँगै आएको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण आगामी केही दशकभित्र विश्वभर थप लाखौँ व्यक्ति नदीजन्य बाढीको खतरामा पर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।
एक साहसी आमा: जसले आफ्नो चार महिने छोरी बचाउन यस्तो भयानक अवस्थाको सामना गरिन्
एजेन्सी । अष्टेलियामा एक महिलाले आफ्नो ४ महिनाको शिशुलाई निकै खतरनाक अवस्थावाट बचाएकी छन् ।
पत्रकार जमाल खसोगीको हत्या भएको साउदी सरकारद्वारा स्वीरकार
काठमाडौं, ५ कात्तिक । साउदी अरेबियाले पत्रकार जमाल खसोगीको हत्या भएको स्वीरका गरेको छ ।
रेल दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु,१२६ जना घाईते
ताइवान, कार्तिक ५ । ताइवानको यीलानमा यात्रुवाहक रेल लिकबाट उछिट्टिंदा कम्तिमा १७ जनाको मृत्यु भएको
अफगानिस्तानमा संसदीय चुनावका बीच श्रृंखलाबद्ध विष्फोट, २१ जना मारिए
काठमाडौं, ४ कात्तिक । अफगानिस्तानमा संसदीय चुनावका बीच श्रृंखलाबद्ध विष्फोट हुँदा २१ जना मारिएका छन्